Noho ny asany dia nanakarama mpitaiza ny reniny, izay havany ihany dia ny neninfarany sy tovovavy 18 taona. Miasa eo amin'ny manodidina eo ihany ny renin’ilay zaza ka aterina eny amin'ny toeram-piasany rehefa hinono amin'ny 9 ora. Tamin'io anefa, tamin'ny 12 ora vao nentin' ireto mpitaiza ilay zaza ary efa tsy miaina intsony. Nentina avy hatrany teny amin’ny Ostie Anosibe. Ny ampitso, niroso tamin'ny fandevenana tany Tritriva Antsirabe ny fianakaviana. Ny zoma, dia niroso tamin'ny fizarana ny ambin’akanjon'ilay zaza ny reniny ho an'ny manodidina. Nisy akanjo vao novidiana ny sabotsy 25 janoary nefa tsy hita. Nisy fotoana niara-nirohotra nioty tsaramaso tany an-tsaha ny fianakaviana ka nosavaina entan'ilay tovovavy. Hita tao ilay akanjo vaovao sy ny patalohan'i maman'i Harena telo. Tonga ireto fianakaviana avy any an-tsaha, dia nitantara ny zava-misy tamin'ny anadahiny ny renin'i Harena. Nantsoina i H. ka notsatohina hoe " niantso ahy ny polisy fa inona izany nataon-droky izany ? Nangalatra ?" Nanda mafy i H. ka nasehon'ilay dadatoan'i Harena ireo entana nangalarin'ilay tovovavy. Tsy vitan'izay fa tsy taitra akory izy nilaza fa " nolalaoviko i Harena dia nahohoko ary nosemporiko tamin'ny ondana ka naveriko nitsilany". Ankona ny rehetra ka nisy nahakasi-tanana. Nambarany fa vokatry ny fialonana. Nampiany ihany koa fa misy hery hafa nanosika azy hamono io zaza io. Efa eo am-pelatanan' ny zandary aty ny famotorana.